Download video site na Flash Video Downloader maka Mozilla Firefox
Na Ịntanetị kwa ụbọchị, anyị na-ezute ọtụtụ ọdịnaya mgbasa ozi anyị chọrọ ịzọpụta na kọmputa gị. Ọ dabara, ngwá ọrụ pụrụ iche maka ihe nchọgharị Mozilla Firefox na-enye gị ohere ịrụ ọrụ a. Otu n'ime ihe ndị dị otú ahụ bụ Flash Video Downloader. Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata vidiyo gaa na kọmpụta nke a na-ahụ naanị na ebe nrụọrụ weebụ n'ịntanetị, a ga-eme ka ọrụ a site na ntinye ihe nchọgharị ntanetị nwere ike ịgbatị ike nke nchọgharị Mozilla Firefox.
Ighachite ochie Mozilla Firefox interface na iji Omuma Okwu Restorer
Ka oge na-aga, ndị mmepe nke Mozilla Firefox nchọgharị na-ahapụ mmelite ọ bụghị naanị na melite arụmọrụ na nchedo, kamakwa na kpam kpam na-agbanwe interface. Ya mere, ndị ọrụ nke Mozilla Firefox, malite na mbipute 29 nke ihe nchọgharị ahụ, enwewo mgbanwe dị ukwuu na ntanetị, nke na-adịghị mma maka onye ọ bụla.
Mozilla Firefox nchọgharị nhicha
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ọrụ nke nchọgharị Mozilla Firefox, ụzọ kachasị mfe na ụzọ kacha mma iji dozie ya bụ ịmechapụ ihe nchọgharị ahụ. Isiokwu a ga-atụle otú ị ga-esi dozie ihe nchọgharị weebụ Mozilla Firefox. Ọ bụrụ na ịchọrọ idozi nchọgharị Mazila iji dozie nsogbu, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na arụmọrụ adabala n'ụzọ dị ịrịba ama, ọ dị mkpa ime ya na njikọta ụzọ, t.
Tinye ọnọdụ incognito rụọ ọrụ na Mozilla Firefox
Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ na-eji ihe nchọgharị Mozilla Firefox, mgbe ahụ na ọnọdụ a, ọ ga-adị mkpa iji zoo nleta nleta ya. Ọ dabara na, ọ bụghị ihe niile dị mkpa ka ị wepụ akụkọ ihe mere eme na faịlụ ndị ọzọ nke ihe nchọgharị na-emepụta mgbe ọ bụla nke weebụ sọọfụ, mgbe Mozilla Firefox nchọgharị nwere irè incognito mode.
Esi kpochapụ akụkọ ihe mere eme na Mozilla Firefox nchọgharị
Ihe nchọgharị ọ bụla na-emepụta nleta akụkọ nleta, nke echekwara na akwụkwọ dị iche. Akụkụ a bara uru ga-enye gị ohere ịlaghachi na saịtị ahụ ị gara mgbe ọ bụla. Mana ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ihichapụ akụkọ ihe mere eme nke Mozilla Firefox, ma n'okpuru, anyị ga-ele anya otú a ga-esi arụ ọrụ a.
Esi eme ka kuki na Mozilla Firefox
Na usoro nke na-arụ ọrụ na nchọgharị Mozilla Firefox, ihe nchọgharị weebụ na-ewepụta ozi natara, nke na-enye ohere ndị ọrụ iji mee ka usoro netwọk weebụ dị mfe. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, ihe nchọgharị ahụ na-adọta kuki - ozi nke na-enye gị ohere ka ị ghara inye ikikere na saịtị ahụ mgbe ị na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ. Na-anabata kuki na Mozilla Firefox Ọ bụrụ na ịga na saịtị mgbe ọ bụla ị ga-arụ ọrụ, t.
Esi mee Mozilla Firefox ihe nchọgharị na-adịghị
Mozilla Firefox bụ ezigbo ihe nchọgharị nwere ike ịdabere na ya kwesịrị ịghọ ihe nchọgharị weebụ na kọmpụta gị. Ọ dabara nke ọma, e nwere ọtụtụ ụzọ na Windows OS nke na-enye ohere ka a debe Firefox dịka ihe nchọgharị ntanetị. Site na ịme Mozilla Firefox usoro mmemme, ihe nchọgharị weebụ a ga - abụrụ ihe nchoputa isi na komputa gi.
Zoro ezo ntọala nchọgharị Mozilla Firefox
Mozilla Firefox nchọgharị dị arụmọrụ, nke na-enye gị ohere ịme mma-rụọ ọrụ nke ihe nchọgharị weebụ na ihe ndị ị chọrọ. Otú ọ dị, ndị ọrụ ole na ole maara na Mozilla Firefox nwere ngalaba na ntọala zoro ezo, nke na-enye ọbụna nhọrọ maka nhazi.
VLC nkwụnye maka Mozilla Firefox
Iji nwee ike ịlele TV na kọmputa gị, ị ga-aga na saịtị ebe ị nwere ike ịlele IPTV online, yana Mozilla Firefox nchọgharị na VLC Plugin arụnyere. VLC Plugin bụ ihe mgbakwunye pụrụ iche maka Mozilla Firefox nchọgharị, nke ndị mmepe nke VLC na-egwu egwu.
Tinye-ons maka nbudata egwu na Mozilla Firefox nchọgharị
Mozilla Firefox Nchọgharị bụ ihe nchọgharị weebụ dị ike nke na-enye ntanye ngosi nke ibe weebụ na ọdịnaya niile. Ma, ọ bụrụ na ị nwere ike igwu egwu na saịtị ọ bụla, ị gaghị enwe ike ibudata faịlụ site na iji ihe nchọgharị ahụ. N'ebe a, ị ga-atụgharị aka n'enyemaka nke tinye-ons pụrụ iche.
Dial Dial maka Mozilla Firefox: ntuziaka maka ojiji
Ihe edokọbara anya bụ otu ụzọ kachasị dị irè iji nweta ngwa ngwa na ibe weebụ. Ntughari kachasị mma ma rụọ ọrụ na mpaghara a bụ ọsọ ọsọ ọsọ maka Mazila. Ịgba ọsọ ọsọ - tinye-maka maka Mozilla Firefox, nke bụ peeji nke nwere ibe edokọbara anya.
Esi bupu okwuntughe site na Mozilla Firefox nchọgharị
Ọ bụrụ na ị bụ onye na - eji ihe nchọgharị Mozilla Firefox mee ihe mgbe niile, ọ ga - abụrịrị na ị chịkọtara ederede nke okwuntughe nke ị nwere ike ịbupu na, dịka ọmụmaatụ, nyefe Mozilla Firefox na kọmputa ọzọ ma ọ bụ hazie nchekwa nke okwuntughe na faịlụ a ga - echekwa na kọmputa ma ọ bụ n'ebe nchekwa ọ bụla.
Ndị nsụgharị maka Mozilla Firefox nchọgharị
N'agbanyeghị mmepe nke Runet, ọtụtụ n'ime ihe ndị na-atọ ụtọ ka na-akwado na ego ndị ọzọ. Ị ma asụsụ ahụ? Nke a abụghị nsogbu ọ bụrụ na ị wụnye otu nsụgharị ndị a tụgharịrị maka Mozilla Firefox. Ndị nsụgharị maka Mozilla Firefox bụ ihe mgbakwunye pụrụ iche a na-etinye n'ime ihe nchọgharị nke na-enye gị ohere ịsụgharị ma ibe ma ibe dum, mgbe ị na-echekwa usoro ochie.
Ghostery maka Mozilla Firefox: ịlụ ọgụ online
Mgbe ọ na-abịa Web Wide Web, ọ bụ nnọọ ihe siri ike ịnọgide na-enweghị aha. N'ebe ọ bụla ị gara, ntanetị pụrụ iche na-anakọta ozi niile na-adọrọ mmasị banyere ndị ọrụ, tinyere gị: lee ngwaahịa ndị dị na ụlọ ahịa n'ịntanetị, okike, afọ, ọnọdụ, akụkọ ihe mere eme, na ihe ndị ọzọ. Otú ọ dị, ihe niile adịghị efu: site n'enyemaka nke Mozilla Firefox nchọgharị na Ghostery gbakwunye na ị ga-enwe ike ichekwa ahaghị.
Ụzọ na-enweghị ike ịchọpụta Mozilla Runtime Error na Mozilla Firefox Nchọgharị
N'oge mmemme ọ bụla na kọmputa, njehie dịgasị iche nwere ike ime ka ị ghara ịnọgide na-arụ ọrụ na ngwaọrụ a. Karịsịa, isiokwu a ga-atụle na enweghị ike ịchọta mmemme nke Mozilla Oge ojiri na ndị ọrụ nke Mozilla Firefox nchọgharị. Njehie enweghị ike ịchọta Oge Mozilla Runtime mgbe ị na-emeghe Mozilla Firefox nchọgharị na-agwa onye ọrụ na achọtaghị faịlụ nchịkwa Firefox na kọmputa ahụ, nke bụ maka ịmalite usoro ihe omume ahụ.
Taa, Java abụghị Mozilla Firefox nchọgharị kachasị mkpa, nke achọrọ maka ngosipụta ziri ezi nke ọdịnaya Java na Intaneti (nke, n'ụzọ, fọrọ nke nta ka ọ laa). N'okwu a, anyị ga-atụle nsogbu ahụ mgbe Java anaghị arụ ọrụ n'ime nchọgharị Mozilla Firefox. Java na Adobe Flash Player plugins bụ ihe kacha nsogbu plugins maka Mozilla Firefox, nke ọtụtụ mgbe jụrụ ịrụ ọrụ n'ime nchọgharị.
Ị nwetụla mkpa ibudata vidiyo ma ọ bụ ọdịyo sitere na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama ebe naanị nzaghachi n'ịntanetị dị? Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​nwere ike ịghọta maka nchekwa Savefrom.net maka nchọgharị Mozilla Firefox. Savefom.net bụ nchịkọta ihe nchọgharị nke na-enye gị ohere ibudata ọdịyo na faịlụ vidiyo site na ikikere weebụ: Vkontakte, YouTube, Ụmụ klas, Instagram, Vimeo na ọtụtụ ndị ọzọ.
Enweghị ụda na Mozilla Firefox: ihe kpatara na ngwọta
Ọtụtụ ndị ọrụ na-eji ihe nchọgharị Mozilla Firefox egwu egwu na vidiyo, ya mere a chọrọ ụda. Taa, anyị ga-ele anya ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ụda adịghị na nchọgharị Mozilla Firefox. Nsogbu na arụ ọrụ dị mma bụ ihe a na-ahụkarị maka ọtụtụ ihe nchọgharị.
Esi tinye ihe edokọbara na Mozilla Firefox
Bookmarks bụ isi ọrụ Mozilla Firefox nke na-enye gị ohere ịchekwa ibe weebụ dị mkpa ka ị nwee ike ịnweta ha n'oge ọ bụla. Otu esi emepụta ibe edokọbara na Firefox, a ga-atụlekwa ya n'isiokwu ahụ. Ịtinye ibe edokọbara gaa Firefox Taa, anyị ga-enyocha usoro maka ịmepụta ibe edokwubara ọhụrụ na nchọgharị Mozilla Firefox.